किन आयो सेयर बजारमा मन्दी ? - Ratopati
केही समययता पुँजी बजारमा मन्दी छाइरहेको छ । विगतका महिनाहरुमा नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने सन्तोषजनक स्थिति नै थियो ।
तर पछिल्ला दिनहरुमा भने परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत भारी मात्रामा गिरावट आइरहेको छ । यसअघि दैनिक अर्बभन्दा माथि रहने सेयर कारोबार पछिल्ला दिनहरुमा ३० करोडको सेरोफेरोमै सीमित हुने गरेको छ भने परिसूचकसमेत निरन्तर रुपमा घटिहेको छ । यो ट्रेन्ड मङ्गलबारको बजारमा पनि कायमै रहेको देखियो । ३ अङ्कले घटेर १४६३ विन्दुमा रोकिएको परिसूचकमा जम्मा ३४ करोड २५ लाखको मात्र सेयर कारोबार हुँदा लामो समयदेखि प्यानिक अवस्थामा रहेका लगानीकर्ताको निराशा थप बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।
नेप्सेको उच्चतम विन्दुपछि हालसम्म लगानीकर्ताहरुले ४ खर्बभन्दा बढी गुमाइसकेको बजारमा पछिल्लो समयको बजार पुँजीकरण १६ खर्ब ४६ अर्ब रहेको छ । बजारमा धेरै लगानीकर्ताहरु प्यानिक अवस्थामा रहँदा उनीहरु बियरिस्ट ट्रयापमा परेका छन् । न त उनीहरु सेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिन सकेका छन् न त सेयर होल्ड गरेर बस्न सक्ने स्थिति रहेको छ । किनभने यो समयमा धेरै लघुविक्त तथा बिमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा भारि गिरावट आइरहेको छ । यस कारण बजारमा मन्दी आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१. बजारमा तरलताको अभाव
पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चमा कमी आएसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भएका विवरणहरु आइरहेका छन् । यसबाट ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले ओभर ड्राफ्ट र सेयर कर्जामा कटौती गर्नाले त्यसको सीधा असर सेयर बजारमा देखिएको छ । जसकारण यसअघि दैनिक एक अर्बभन्दा माथि कारोबार हुने बजारमा पछिल्लो समय ३० देखि ५० करोडको हाराहारीमा मात्र कारोबार हुने गरेको छ । यद्यपि राष्ट्र बैङ्कले तरलता समस्या समाधान गर्न प्रयासहरु जारी राखे पनि त्यो तत्काल समाधान नहुने देखिन्छ । तरलता अभाव हटाउनकै लागि राष्ट्र बैङ्कले अहिले ४० अर्ब रुपियाँ बजारमा पठाउँदै छ । यसअघि राष्ट्र बैङ्कले रिभर्स रिपो पनि जारी गरेको थियो ।
२. नेपाल लाइफको एफपीओको असर
नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले भर्खरै जारी गरेको एफपीओमा लगानीकर्ताले ५० अर्बभन्दा बढी रकमको आवेदन दिएका छन् । बजारमा रहेको लगानीयोग्य ठूलो रकम त्यता जाँदा त्यसको केही असर बजारमा देखिएको छ ।
३. राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी प्रतिवेदनको मनोवैज्ञानिक असर
सोमबार जारी गरेको देशको पछिल्लो ५ महिनाको आर्थिक प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानी गरेको ठूलो कर्जा रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गई जोखिम बढेको भन्दै सचेत गरायो । घर जग्गा र सेयरमा धेरै रकम लगानी गर्दा खराबकर्जा बढ्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैङ्कले विवेकशील तथा सावधानीपूर्वक लगानी गर्न सुझाव दिएको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर परेको देखिन्छ । यद्यपि बजार पुँजीकरणको जम्मा २ प्रतिशत रकम मात्र सेयर कर्जामा गएकाले यसलाई ठूलो मान्न नमिल्ने तर्क सेयर लगानीकर्ताहरुको छ ।
४. हकप्रद र बोनसको असर
राष्ट्र बैङ्कको पुँजी वृद्धि योजनाअनुरुप पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी वृद्धिको लागि ठूलो परिणममा हकप्रद र बोनस सेयर वितरण गर्नाले त्यसको असर विस्तारै विस्तारै देखिन थालेको छ । हकप्रद र बोनसबाट बजारमा ठूलो मात्रामा सेयरको भोलुम देखिएको छ । जसबाट आपूर्तीमा व्यापक चाप देखिएको छ भने सोहीअनुसारको माग भने देखिएको छैन । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा बजार कमजोर देखिएको छ । साथसाथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुजी बढाए पनि सोहीअनुसारको बिजनेस नहुँदा पुँजी वृद्धिको अनुपातमा नाफा बढ्न सकिरहेको छैन । जसले ब्यापक रुपमा कम्पनीहरुको प्रतिसेयर आम्दानी घटिरहेको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय एफपीओ र हकप्रद सेयर भर्नको लागि लगानीकर्ताहरुले धमाधम आफ्नो पुरानो सेयर बेचेर स्रोत जुटाउँदै छन् । जसले बजारमा बिक्री चाप देखिएको छ ।
५. अन्य कारण
भारु नोटमा प्रतिबन्ध, बिमा र लघुविक्त क्षेत्रमा देखिएको अन्योल, प्राविधिक विश्लेषकहरुले गरेको अनुमान, म्युचुअल फन्डको निष्कृयता, तथा सेयरको बढी आपूर्ति, राजनीतिक अन्यौल र केही ठूला लगानीकर्ताको चलखेल र उनीहरुले छरेको भ्रम तथा लगानीकर्ताको कमजोर आत्मविश्वास, कालोधन छानविनको हल्ला, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसन्स दिने कुरामा धितोपत्रबोर्ड, नेप्से तथा सेयर दलालहरुमा रहेको असमझदारी, पौष मसान्त, सेयरको सिजनल प्रभाव र पुँजी वृद्धिसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा आएको कमी जस्ता कारणले बजार मन्द गतिमा चलेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समयको बजारको सुस्तता हेर्ने हो भने अहिलेको बजारलाई सन्तुलनमा ल्याएर दरिलो बनाउनको लागि अब साना लगानीकर्ताले मात्र सम्भव नहुने देखिएको छ । किनकि बजारमा सेयरको आपूर्ति यति धेरै भएको छ कि त्यसलाई साना र व्याक्तिगत लगानीकर्ताले मात्र धान्न सम्भव नै छैन । जसका लागि संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसको साथै दीर्घकालीन लगानी बजारमा आवश्यक छ । बजार परिपक्व बनाउन मार्केट मेकरको आवश्यकता देखिएको छ । बजारलाई अहिलेको डेन्जर जोनबाट पार लगाउनको लागि अब काठमाडौँको बजारले मात्र सम्भव नै छैन । बजारको आपूर्ति अत्यधिक भएकाले मागको लागि अब देशभर जानुपर्ने देखिएको छ । जसको लागि तात्कालिक रुपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदै दीर्घकालीन रुपमा अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममा जानुपर्ने देखिन्छ । बजारमा सेयर साक्षारताको अभावले पनि जोखिम बढ्दै गएकाले सरकारले आधिकारिक परामर्शदातालाई बजारमा ल्याउनका लागि नीतिगत व्यावस्था गर्नु जरुरी छ वा अहिलेका सेयर ब्रोकरलाई पनि परामर्शदाताको पनि थप भूमिका दिनु आवश्यक छ ।
अहिलको बजार अब कता जान्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने अवस्थामा छ । यद्यपि बजार तत्काल नै सुधार हुने कुरामा भने त्यति दरिलो आधार देखिएको छैन । देशमा राजनीतिले सही मोड लिएर चुनावको घोषणा नभएसम्म बजारको गति अझै केही दिन यही अवस्थामा नै रहने देखिएको छ ।